Iimpawu Eziqabulayo Ngeentlobo
Imiba enomdla kunye neempawu zeeFleas
Fleas ?! Baye (ngokukodwa) babetha abantu ngenxa yeenkulungwane, kodwa uninzi kangakanani na ngeenambuzane eziqhelekileyo? Masiqale ngeenqaku ezili-10 ezithandekayo malunga neentambo.
1. Iifukane ziyinto engathandekiyo indima yabo ekudluliseni iNdlu yokuFa.
Ngexesha leMinyaka Ephakathi, amashumi ezigidi zabantu bafa ngesibetho, okanye kuBafa Bomnyama , njengoko isasazeka kwi-Asia naseYurophu. Iidolophu zazinzima kakhulu. ILondon yalahlekelwa yi-20% yabemi bayo kwisibetho kwiminyaka emibini nje phakathi kwe-1600.
Kwaye kwada kwada kwafika ekupheleni kwekhulu lama-20, nangona kunjalo, ukuba saqaphela isizathu sesibetho - ibhaktheriya ebizwa ngokuthi yiYersinia pestis . Yintoni enxulumene ngayo neentambo? Iifleas zithwala ibhaktheriya yesibetho kwaye zithunyelwa kubantu. Ukuqhambuka kwesibetho kudla ngokubulala inani elikhulu leentonga, ngokukodwa iingcongolo, kunye negazi, iifostile ezinetyholongwane ziphoqelelwe ukuba zifumane umthombo wokutya omtsha - abantu. Kwaye isibetho asikho isifo sexesha elidlulileyo, nokuba. Sinenhlanhla yokuhlala kwiminyaka apho iintsholongwane kunye neendlela zokucoceka ezihlambulukileyo ziqhubeka zibethe ukufa kwabancinci.
2. Iifleas zibeka amaqanda azo kwezinye izilwanyana, kungekhona kwiphephethi yakho.
Ukungaqondi kakuhle malunga neentambo kukuba babeka amaqanda abo kwi-carpeting yakho kunye nefenitshala. Iintlanzi zibeka amaqanda azo kwi-animal host host , oku kuthetha ukuba inja yakho iFido ineentlanzi ezindala ezihlala ebomini bayo, ezo ntlanzi zikhulile zenza konke okusemandleni ukuze zihlale zingenazo.
Noko ke, amaqanda athambileyo awanamathe ngqo okanye afanelekile ukuhlala, ngoko ke baninzi baqhekeza isilwanyana sakho kunye nomhlaba kwisitya sakhe seenja okanye kwiphephethi.
3. Iintlobo zibeka amaqanda amaninzi.
Ngaphandle kokungenelela, iifos ezimbalwa kwiFido zingakhawuleza ziba ngumkhuhlane okhuphayo owenza ukuba ungeke ukwazi ukunqoba.
Kungenxa yokuba inambuzane, njengamathubhe ebhedi kunye nezinye izilwanyana ezincitsheni zegazi, ziya kwanda ngokukhawuleza xa zifumene isilwanyana esihle. Umntu omdala ongatshatanga unako ukubeka amaqanda ama-50 ngosuku xa uphelelwa kakuhle kwigazi likaFido, kwaye kwixesha elifutshane elifutshane likwazi ukuvelisa amaqanda angama-2 000.
4. Igazi lokudala i-pleas igazi.
Iifle zondla kuphela ngegazi, zisebenzisa ukubhoboza kwazo, zityana imilomo ukuze zitshintshe kwimikhosi yazo. Umtsalane omdala ungathabatha ukutya okungama-15 ngosuku olulodwa. Kwaye kunye naluphi na isilwanyana, i-flea ivelisa inkunkuma ngexesha lokuphela kwenkqubo yokugaya. Iimfumba ezitshisiweyo zihlala ziseleyo igazi. Xa ziqhaqha, izilwanyana zondla kule nkunkuma yomileyo eyomileyo, ngokuqhelekileyo ishiywe kwindawo yokulala.
5. Iifukane ziluhlaza.
Iifukane zihlala zihlala kubomvu okanye kwiintlobo zezilwanyana ezisindayo. Ukuba zakhiwe njengezixhaphazi ezininzi, ziza kufakwa ngokukhawuleza. Imizimba ekhukhulayo iminyene kwaye ilula, yenza kube lula ukuba iqhubu lihambe ngokukhululekile phakathi kweengqumbo zobhokhwe okanye iintsiba kwimikhosi yazo. I-proboscis ye-flea, umlo obunjwa ngumthi owenza ukuba uphonononge ulusu kunye ne-siphon igazi kwi-host host, uhlala ungena ngaphantsi kwesisu nangasemilenzeni xa ungasetyenziswa.
6. Uninzi lweengcambu ezithintekayo kumakhaya zintambo zeekati, kwimizi engenamakati.
Ngokuphawulekayo, izazinzulu ziqikelela ukuba kuneentlobo ezingaphezu kwe-2 500 zeentlanzi emhlabeni.
Ngaphantsi kwama-48 ase-United States, iiflethi zeenombolo ezi malunga ne-325. Kodwa xa i-fleas ihlalisa indawo yokuhlala yabantu, phantse njalo i-cat fleas, iCtenocephalides felis . Ungamangaleli i-kitties ngenxa yokucaphukisa, nangona kunjalo, nangona egama labo eliqhelekileyo, i-cat fleas nayo inokwenzeka ukuba idle kwizinja njengoko zikhona kwiikati. Izintambo zeenja (i- Ctenocephalides canis ) ingaba yinkathazo yenkathazo, kodwa ifunyaniswa kakhulu kwizinja ezichitha lonke ixesha okanye ixesha elininzi labo ngaphandle.
7. Iifukane ezinkulu zahlutha ama-dinosaurs kwangaphambili kwiminyaka eyi-165 yezigidi edlulileyo.
Iingqungquthela zokunyanzelisa i- Inner Mongolia kunye neChina zibonisa ukuba iifoshi zaphahlaza iidinosaurs, nazo. Iintlobo ezimbini, ezibizwa ngokuba yiPseudopulex jurassicus kunye nePseudopulex magnus , zahlala ngexesha lamaMesozoic. Iindidi ezininzi ze-dino, i- Pseudopulex magnus , yayiyi-0.8 intshi enomtsalane ubude, ibe nemilenze ekhangayo ngokulinganayo yokukhanda isikhumba se-dinosaur.
Ezi zikhokho zeentlobo zamhlanje zazingenakukwazi ukugxuma, nangona kunjalo.
8. Iiflethi zikhetha indawo ezomileyo.
Iifukane azichumisi ngokunyuka kwe-humidity, kungenxa yokuba azinalo nje ingxaki yenkathazo kwiindawo ezinomileyo ezinjengeMzantsi-ntshona. Umoya omile ukwandisa umjikelezo wobomi, kwaye xa umswakama onxulumene nawo uwela ngaphantsi kwe-60 okanye i-70%, izibungu ezikhuni zingenakuphila. Ngokuchaseneyo, umjikelezo wobomi obushushu ukhawuleza xa ubumanzi buphezulu, ngoko qhubeka ukhumbula engqondweni xa uzama ukulawula ukukhulelwa komkhuhlane. Nantoni na into ongayenza ukuze umise umoya ekhaya lakho kuya kukunceda ukuphumelela imfazwe nxamnye nalezi zinambuzane zegazi.
9. Iintlobo ziyizakhono ezinqabileyo.
Iifukane aziboni, kwaye azize zikwazi ukubamba inja yakho enkundleni yeenyawo (nangona unemilenze emithathu kwiFido ezine). Ngoko ezi zinambuzane ezincinane zikwazi njani ukujikeleza? Iifukane ziyamangaliswa ngokuzibethela emoyeni. Iifati zekati, i-flea yethu eqhelekileyo, ikwazi ukuzithobela iisentimitha eziyi-12 phambili okanye ngaphezulu. Lo mgangatho wokuqaqa ulingana namaxesha angama-150 ubude bawo. Ezinye iimithombo zithelekisa oku kuhla komntu ukuxuma okude malunga neenyawo ezili-1.
10. Iintlobo azikhethi ngegazi labo abaza kusela.
Ngomnyaka we-1895, iLos Angeles Herald yanikela "ngeenyaniso malunga neentambo" kubafundi bayo. Umlobi waseHerald wathi, "I-flea," ibonisa ukhetho lwabesetyhini, abantwana kunye nabantu abaneembumba ezincinci. " Amadoda aphuhliweyo anokhenkco ayenokuthi anikwe ubungqina bobuxoki ngokwale kholomu, kuba iifleas ziya kusela ngokuzonwabisa nayiphi na igazi ekhoyo kubo. Iintlobo zivelele kwiimfuduko ezihamba ngomgangatho njengoko abantu kunye nezifuyo zihamba ngeendlu.
Bangakwazi ukubona nokuba khona kwecarbon dioxide esiyikhuphayo. Ukuba isandi okanye isicaka sichaza ukuba umntu ongasondeza igazi usekufuphi, umquba olambile uya kuqaqa kwicala lawo, ngaphandle kokuqwalasela okokuqala ukuba umphathi ungumntu, umfazi okanye umntwana.
"Isibetho: Ukufa Okumnyama," kwiwebsite ye-National Geographic. Ifumaneka kwi-intanethi ngo-Oktobha 18, 2016.
"Isibetho: I-Ecology kunye noTshintsho," amaZiko okuLawula nokuThusela kwiWebhsayithi. Ifumaneka kwi-intanethi ngo-Oktobha 18, 2016.
"Ukugqithisa ikhaya lakho leeFleas," nguMike Potter, iYunivesithi yaseKentucky iSebe leNgqungquthela, i-fact sheet # 602. Ifumaneka kwi-intanethi ngo-Oktobha 18, 2016.
"Ezinye Iinkcukacha Ngeentlobo," eLos Angeles Herald , uMqulu 44, Inani 73, 23 Juni 1895, iphepha 21.
Isikhokelo soMgqirha kwi-Arthropods of Importance Medical , edition 6, nguJerome Goddard.
"I-Fleas," iSebe leYunivesithi ye-Purdue University of Entomology. Ifumaneka kwi-intanethi ngo-Oktobha 18, 2016.
"Abafayo begazi"! I-Fleest Oldest Fleas Discovered, "nguStephanie Pappas, iwebhusayithi ye-LiveScience, ngoFebhuwari 29, 2012. Kufumaneka kwi-intanethi ngo-Oktobha 18, 2016.
I-Monster 'Fleas' Yenza i-Bite kwi-Dinosaurs, "nguJeanna Bryner, iwebhusayithi ye-LiveScience, ngoMeyi 2, 2012. Kufumaneka kwi-intanethi ngo-Oktobha 18, 2016.
I-Grasshoppers, iiCricket kunye neKatydids, Order Orpoptera
Iimpapasho ezi-10 eziphezulu ze-Movie ezithandana ne-Classic Rock Music
Biography kaBonnie Parker
I-10 ye-LGBT Abaculi bexesha lonke